ပျားရည် အသုံးဝင်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပျားရည် အသုံးဝင်ပုံ
Posted by ခင်ခ on May 21, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီ စာစုလေးတွေထဲက ပျားရည်အသုံးဝင်ပုံလေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်။
ပျားရည်သည် တွဲဖက်အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများအား အာနိသင်တိုးပွားစေသည့်သတ္တိရှိသည်။
ပျားရည်သည်အချိုဖြစ်သော်လည်း သတ်မှတ်သည့်ပမာဏအတိုင်း ဆေးနှင့်ရောနှောစားသုံးပါက ဆီးချိုရောဂါသည်များ သို့မဟုတ် အ၀လွန်သူများကို ဥပဒ်မပေးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။(ပျားရည် မစစ်ဘဲ သကြားရောရောင်းတဲ့ အတုတွေတော့ သတိထားရမှာပါ။)
ပျားရည်သည်ရှေးအကျဆုံးအချိုဓါတ်ဖြစ်ပြီး ချိုစေသည့် ပစ္စည်းဟု လူတို့နားလည်ထားကြ ပါတယ်။ရှေးဘေဘီလုံခေတ်တွင် လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ သမက်ဖြစ်သူအား ပျားရည်အရက်ကို သမက်ဖြစ်သူသောက်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု အစဉ်အလာတစ်ခုကို သိရပါသည်။ထိုအရက်ကို အိမ်ထောင်ပြုပြီးသည့်အချိန်မှ တစ်လတိတိသောက်ကြရသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး ပျားရည်( honey moon )ဟူပြီး စကားရပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ယခုခေတ်တွင် ( honey moon )ကို ပျားရည်ဆမ်းခရီးဟု လူသိများလာခဲ့ပါသည်။
ပျားရည်သည်ပန်းဝတ်ရည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ပျားရည်တွင် ဗီတာမင် ဘီ-၁၊ ဘီ-၂၊ စီနှင့် နီကိုတင်းနစ် အက်ဆစ်လည်းပါဝင်သည်။အာဟာရတန်ဖိုးမှာ အဆင့်မြင့်သကြားထက်ပိုမိုပါဝင် ပါသည်။ပျားရည်ကိုသကြားအစားသုံးစွဲမည်ဆိုပါက အလေးချိန်အစားထုထည်ဖြင်တိုင်းသုံးပါက ကယ်လိုရီပိုမိုရရှိပါမည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်အမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၁)ဇွန်း+ပျားရည်(၂)ဇွန်း ရောပြီး ၀က်ခြံများကို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်လူးပြီး နောက်နေ့နံနက်တွင် ရေနွေးဖြင့်မျက်နှာသစ် ခြင်း စသည်ဖြင့်(၂)ပတ်ခန့် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျှင် ၀က်ခြံများပျောက်သည်ဟုသိရပါသည်။
အဆစ်ရောင်ရောဂါအတွက် ပျားရည်(၁)ဆ+သစ်ကြံပိုးခေါက်အနည်းငယ် ရောဖျော်ပြီး လိမ်းဆေးအဖြစ် နာကျင်သည့်နေရာများလိမ်းပေးပါက သက်သာနိုင်ပါသည်။
အပူလောင်ခြင်းအတွက် ပျားရည်+နနွင်းမှုန့်ရောပြီး လိမ်းပေးနိုင်သည်ဟုသိရပါသည်။
အအေးမိ ချောင်းဆိုပါက ငရုပ်ကောင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်+ပိတ်ချင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ+ပျားရည် တစ်ဇွန်း ရောဆပ်ပြီးလျှက်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
၀မ်းလျှောခြင်းအတွက်(အထူးသဖြင့်ကလေးများ) ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး အမှုန့်+ပျားရည်ရောပြီး စားသုံးပါက သက်သာနိုင်ပါသည်။တစ်နေ့(၂)ကြိမ် (၃)ကြိမ်သာသောက်ရပါမည်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ အားရှိရန်ပျားရည်တစ်ဇွန်း သောက်ထားပါက အင်အားဓာတ် အကြာကြီးရရှိမည်။
သွေးထဲတွင် ကိုလက်စထရောများပြားပါက သစ်ကြပိုးခေါက်မှုန့်ကို ပျားရည်နှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖျော်ပြီး ပေါင်မုန့်ယိုသုတ်သလို ပြုလုပ်စားပါက လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။
သစ်ကြပိုးခေါက်မှုန့်(၂)ဇွန်း+ပျားရည်(၁)ဇွန်းကို ရေနွေးဖြင့် သောက်ပါက ဆီးအိမ်ထဲရှိပိုးများကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
ပျားရည်(၁)ဇွန်း+ဟင်းရွက်ဆီ(၁)ဇွန်း+ရှောက်ရည်(၁)ဇွန်း၏လေးပုံတပုံ ကို ရောမွှေပြီး လက်တံတောင်ဆစ်၊ခြေဖနောင့်၊လက်ဖနောင့် စသည့်နေရာများမှ အရေပြားခြောက်သွေ့သည့် နေရာများနှင့် အမာရွတ်များကို လိမ်းပါ။(၁၀)မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေဆေးခြင်းပြုပေးပါက သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
စစ်မှန်သော ပျားရည်ကိုအိမ်တိုင်း ဆောင်ထားသင့်သည်ဟု တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
နွားနို့ထဲ ပျားရည်ထည့်သောက်ရင် အရပ်ရှည်တယ်ဆိုလား ဖတ်ဖူးပါကြောင်း
ဖျဲသီးကို ဘဲဥနဲ့စားရင် စော်ကြည်တယ်ပြောတယ်ဗျ
ဟိုတလောက ကျုပ်လဲ ဝမ်းလျောသလိုဖြစ်တော့ ပျားရည်ကို ငါးကျပ်သားလောက်
မ khin kha ရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက်ပျားရည်နဲ့အသုံးချမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ…
အဲတာ ကိုခင်ခ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..
တိန်.. နာပဟ ..
ပျားရည် စစ် မစစ် ကိုကော ဘယ်လိုခွဲသလဲခင်ဗျား..
မေ့နေပြီ ပျားရည်ကို ယူပြီး ခွေးကို လျက်ခိုင်းတယ်ဆိုလားမသိ မလျက်ရင် အစစ်တဲ့
နောက်တခုကပျားရည်အစစ်ရဲ့ ပန်းပေါင်းရနံ့ တွေပါဝင်နေတဲ့အနံ့ကိုပုရွက်ဆိတ်တွေမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ပုရွက်ဆိတ်တွေမတက်ပါဘူး..
ပျားရည်အစစ် is not only for women but also very good for men !!! အဲဒါ ဘရုတ်ကင်း အင်းဂလိ Kwi
“””ရှေးဘေဘီလုံခေတ်တွင် လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ သမက်ဖြစ်သူအား ပျားရည်အရက်ကို သမက်ဖြစ်သူသောက်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု အစဉ်အလာတစ်ခုကို သိရပါသည်။ထိုအရက်ကို အိမ်ထောင်ပြုပြီးသည့်အချိန်မှ တစ်လတိတိသောက်ကြရသည်။ ထိုအချိန်
မှစပြီး ပျားရည်( honey moon )ဟူပြီး စကားရပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ယခုခေတ်တွင် ( honey moon )ကို ပျားရည်ဆမ်းခရီးဟု
ဒါဆိုတော့ နော် ပျားရည်ဆမ်းအစ ဘေဘီလုံကပေါ့။မှတ်သားသွားပါတယ် ကိုခင်ခရေ။ကိုခင်ခကို အစကကျနော်လဲ မိန်းကလေးထင်နေတာဗျ။
ပျားရည် စစ်ရင် ပုရွက်ဆိတ် မတက်ဘူး ကြားတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်က ပျား ကို ကြောက်လို့လားတော့ မသိဘူး။
ပျားရည်ထဲ ထညက်ရည် ရောတာတို့ ဘာတို့ လုပ်ကြတယ်။ လူတွေ အကျင့်တော်တော် ပျက်နေကြတာ..
ပျားရည် က မီးမလောင်ဘူး လည်း ကြားဖူးတယ်။
ပျားရည် စစ်ရင်တော့ အလွန်ကောင်းတယ် ပြောတယ်။
လည်ပင်းနာနေရင်လည်း ပျားရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း စာလောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သောက်ပေးရင်လည်း သက်သာတယ် ……..
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့.. ငါးပါးသီလနဲ့.. ပျားရည်ပေးတွေ့လိုက်ရမလား..။
ပျားမွေးမြူ.. ပျားရည်ထုတ်တဲ့..ထုတ်မဲ့သူတွေကို.. ကွန်ဆာဗေးတစ်ရှေးစွန်းစွဲတွေ.. ဘာပြောကြမယ်ထင်သလည်း..။ ?
The following table is offered as an indicator of the volume of honey produced by country, but keep in mind that most of this honey is industrial-grade and not destined for the honey pots on our tables. Largest producers of honey for both table and industrial use.
Country	Year	x1000 Tonnes
China	2007	200
EU	2007	189
Turkey	2007	74
Ukraine	2007	68
Argentina	2009	65
USA	2007	65
Mexico	2007	56
Russian Federation	2007	54
India	2007	52
Ethiopia	2007	44
ပျာရည်ဟာ လူတွေအတွက်ဆေးဖက်ဝင်ရင်.. အဲဒီအထဲဘာဓါတ်သဘာဝတွေပါသလည်း.. ကြည့်တယ်.. စစ်တယ်.. စမ်းသပ်တယ်..
ဆေးဝါးနဲ့.. နေ့စဉ်သုံးစားစရာတွေ.. မုန့်တွေ.. စသဖြင့်ထုတ်ပါတယ်.. ဆေးနဲ့.. လူ့အသက်တွေကယ်ပါတယ်..။
တိုးတက်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက အဲဒီလိုနဲ့.. အဲဒါတွေ..ဖြစ်လာပါတယ်..
“ပျားရည်နဲ့ ၀မ်းချတာ”မဟုတ်.. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့.. “၀မ်းနှုတ်ဆေးကို ထီထွင်ကြတာ”…
ကောင်းတယ်ဗျာ ဒီလို ပျားရည် အစွမ်းကို ရှာဖွေ တင်ပြတာ
ပျားရည် စစ်တော့ ရှားပါတယ် စစ်မစစ် ကို စမ်းတာလည်း နည်းတွေကများပါတယ်
တို့ ကြည့် လျှက်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ် ။ချက်ဆေးတွေမှာ ပျားရည် ထည့်ရပါတယ် ဥပမာ ရှား
ဇောင်း လက်ပတ် ချက်ဆေး။
ကြက်သွန်ဖြူပျားရည်တို့ ဘာဘာညာညာတွေလည်း အပြင်မှာ တွေ့ရပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင် ပျားရည်စစ်နဲ့ ဆင်တုံးမနွယ် စိမ်တာတို့ စမှုံနက် ရောတာတို့ အကျိုးများပါတယ်။
လေ့တာ တင်ဆက်တာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ